पत्रकारितामा यसलाई बनाउनका लागि, विद्यार्थीहरूसँग समाचार अनुभव हुनुपर्छ
पत्रकारितामा यसलाई बनाउनका लागि, विद्यार्थीले समाचारको लागि नाक विकास गर्नु पर्छ
सामान्यतया, यो एक असाध्य विकास हो जब तपाईं आफ्नो टाउको भित्र आवाज सुन्नु भयो। पत्रकारहरूको लागि, सुन्न नपाउने मात्र होइन तर यस्ता आवाजहरूमा पनि ध्यान दिनु आवश्यक छ।
म के कुरा गर्दै छु? रिपोर्टरहरूले कुन कुरालाई "समाचार भावना" वा "न्युजका लागि नाक" खेती गर्नु पर्छ "एक ठूलो कथा कुन कुराको लागि सहज महसुस गर्दछ। एक अनुभवी रिपोर्टरको लागि , समाचार अर्थले प्रायः आफु भित्रको चिल्ला आवाजको रूपमा प्रकट गर्दछ जब एक ठूलो कथा ब्रेक हुन्छ ।
"यो महत्त्वपूर्ण छ," आवाजको आवाज। "तपाईंले चाँडै लैजान आवश्यक छ।"
म यो माथि उठ्छु किनकी एक ठूलो कथा को लागी एक महसुस विकासशील छ मेरो केहि पत्रकारिता विद्यार्थी संग संघर्ष। मलाई यो कसरी थाहा छ? किनकि म नियमित रूपमा मेरो विद्यार्थीहरू लेख्ने अभ्यास दिन्छु जुन सामान्यतया एक तत्व हो जुन तल नजिकैको दफन गरिएको छ, जुन अर्को भाग-को-मिल-मिल कथा पृष्ठ हो - एक सामग्री।
एक उदाहरण: दुई-टक टकराउने बारे व्यायाममा, यो पारित भएको उल्लेख गरिएको छ कि स्थानीय मेयरको छोरा क्र्यासमा मरेको थियो। कुनै व्यक्तिको लागि समाचार व्यापारमा पाँच मिनेट भन्दा बढी खर्च भएको छ, यस्तो विकासले अलार्म घन्टी बजाउँदछ।
अझै मेरो धेरै विद्यार्थीहरूले यो सम्भव कोणमा प्रतिरक्षा लगाउँछन्। तिनीहरूले dutifully माझको छोरा आफ्नो मृत्यु को तल मा दफन को मृत्यु संग टुक्रा लेख्नुहोस् , वास्तव मा यो वास्तविक व्यायाम मा थियो। जब मैले पछि बिस्तारै बिस्तारै छु कि उनीहरु - कडा-समय-कथामा, उनी प्राय: रहस्यमय लाग्दछन्।
मेरो बारे मा एक सिद्धान्त छ किनकि आज धेरै जे-स्कूल विद्यार्थीहरू समाचार अर्थको कमी छ। म विश्वास गर्छु किनभने तिनीहरूमध्ये धेरै कमहरू सुरू गर्न खबरहरू पछ्याउँछन् । फेरि, यो केहि चीज हो जुन मैले अनुभव बाट सिकेको छु। हरेक सेमेस्टरको सुरुमा म आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई सोध्दछु कि कतिजना उनी अखबार वा समाचार वेबसाइट दैनिक पढ्छन्।
सामान्यतया, हातको मात्र तेस्रो माथि उठ्न सक्छ , यदि त्यो। (मेरो अर्को प्रश्न यो हो: यदि तपाइँ समाचारमा रूची छैन भने पत्रकारिता वर्गमा किन हुनुहुन्छ?)
धेरै कम विद्यार्थीहरूलाई समाचार पढ्दा , मलाई लाग्छ कि यो आश्चर्यचकित छैन कि धेरै केहि समाचारको लागि नाक छ। तर यस व्यवसायमा एक क्यारियर निर्माण गर्ने आशाको लागि यस्तो भावना बिल्कुल महत्वपूर्ण छ।
अब, तपाईं कारकहरु लाई केहि समाचारव्यापी बनाउन को लागी छात्रों को ड्रिल गर्न सक्छन् - प्रभाव, जीवन को हानि, परिणामहरु र यति मा। हरेक सेमेस्टर मैले मेरो विद्यार्थीहरू मेलिभिन मेर्चरको पाठ्यपुस्तकमा प्रासंगिक अध्याय पढे, त्यसपछि उनीहरूले तिनीहरूलाई प्रश्न गरे।
तर केही बिंदुमा एक समाचार अर्थको विकासले रोटी सिकेर बाहिर जानुपर्छ र एक पत्रकारको शरीर र आत्मामा अवशोषित हुनुपर्छ। यो अव्यवस्थित हुनुपर्छ, एक पत्रकारको धेरैको अंश।
तर यदि यो समाचार समाचारको बारेमा उत्साहित छैन भने, किनकि एक समाचार अर्थ वास्तवमा एड्रेनालिइन चाँडोको बारेमा हो जुन सबैको ठूलो कथाले भरिएको व्यक्तिलाई यति राम्रो थाहा छ। यो भावना हो कि एक हुन सक्छ यदि त्यो पनि एक राम्रो रिपोर्टर हुनु हो, एकदम राम्रो एकदम कम।
आफ्नो ज्ञापन "बढ्दो अप" मा, न्यू यॉर्क टाइम्सका लेखक रसेल बेकरले उनी र स्कुटी रेनोनलाई अर्को पौराणिक टाइम्स रिपोर्टरलाई सम्झाउँछन्, समाचारको लागि दोहोरो भोजनको लागि सुत्न छोडे।
भवन बाहिर निस्केपछि तिनीहरूले सन्यासको जलाशय सडकमा माथि उठे। त्यसपछि फेरि पहिले देखि नै रहन थाल्नु भयो, तर शोर सुन्नु भएको थियो, बेकरले आफ्ना किशोरमा क्युब रिपोर्टरको रूपमा सम्झिदियो, दृश्यमा रेसिंग कस्तो लाग्न थालेको थियो।
बेकर, अर्कोतर्फ, एहसास भयो कि आवाजले उहाँलाई केहि पनि हलचल गर्दैन। त्यस क्षणमा उनीहरूले ब्रेक-समाचार रिपोर्टरको काम गरेपछि उनको दिन बुझ्यो।
यदि तपाईं समाचारको लागि नाक विकास गर्नुहुन्न भने तपाइँ यसलाई रिपोर्टरको रूपमा बनाउनुहुन्न भने, यदि तपाइँ आफ्नो टाउको भित्र कि आवाज चिन्नुहुन्छ भने। र यो हो भने तपाईं कामको बारेमा उत्साहित हुनुहुन्न भने।
गोल्फ कोर्समा केसिलो जल के हो?
ध्वनि स्क्रिप्ट - शब्द तनाव र इन्टोनेशन
क्यानाडा क्यासिनोमा मुद्रा एक्सचेंज
सिन्डी वान्डेन्डिडेन - स्पीड फ्र्याक हत्यारेको एक कष्ट
1801 को न्यायाधीश अधिनियम र मध्यरातका न्यायाधीशहरू
जल प्रदूषण: कारणहरू, प्रभावहरू, र समाधानहरू
के तपाईं इक्वेनक्सको अन्त्यमा अन्त्यमा साँच्चै खडा गर्न सक्नुहुन्छ?
भाषामा गूंज प्रश्न
Phileo: बाइबलमा भाइलाई माया गर्नुहोस्
दोस्रो त्रिभुवनका युद्ध: फिलिप्पीको युद्ध
अस्थिरताबारे चर्चा गर्दै: डिग्रीहरूको कुरा
के के जी जी म Mustang जीटी मा खडा छ?
के तपाईंको बालबालिकाको लागि सही गृहकार्य गर्ने हो?
हम्बल्डट राज्य प्रवेश
फेरारी - उपनाम अर्थ र पारिवारिक इतिहास
पिंग-पाङ्ग Beginners को लागि महत्वपूर्ण टेबल टेनिस नियम
खगोल विज्ञान दिवस: एक समय को ब्रह्मांड को मनाने को समय